Soomaaliya iyo Midowga Yurub oo heshiis kala saxiixday – WARSOOR
Muqdisho – (warsoor) – Dowladda Soomaaliya iyo Midowga Yurub ayaa maanta magaalada Muqdisho ku kala saxiixday heshiis mashruuc dib loogu dhisayo wadooyinka gobolada iyo Muqdisho isku xira oo ku kacaya 60 milyan oo Euro.
Mashruuca dib udhiska waddooyinka goballadda Soomaaliya ayaa hadafka laga leeyahay waxa uu yahay in la suura geliyo hannaan dhaqaalaha dalka lagu kobciyo, lana dhiirri geliyo is-dhex-galka gobalka iyo waddamada deriska. Dhaqaalaha guud ee deeq bixiyaashu ugu tala galeen mashruuca ayaa ah 59.75 Mliyan Oo Yuuro. Dhaqaalaha ayaa ka kooban 42 Milyan oo ka timid Midawga Yurub, 12.31 Milyan oo ka timid snaduuqa horumarinta Afrika, 3.5 Milyan oo ay bixinayso dowladda Soomaaliya, 1.94 Milyan oo ka imaanaysa NEPAD-IPPF. Bangiga horumarinta Afrika iyo wasaaradaha ay qusayso ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa fulinaya mashruuca..
Heshiiskan ayaa waxaa maanta wasa saxiixday wasiirka Qorshaynta, maal-gashiga iyo horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya Jamal Maxamed Xasan, iyo safiirka midawga Yurub ee Soomaaliye Mr. Nicolas Berlanga Martinez.
Mashruuca dib udhiska waddooyinka goballada Soomaaliya ayaa waxaa dib loogu dayac tirayaa 355 kilomitir oo kamid ah waddooyinka isku xira dalka.
Kal-Fadhigii 36-aad Ee Golaha Wasiirradda Somaliland Oo Laba Wasaaradood Lagaga Dhegeystay Warbiximo